चिनी उद्योग अवरुद्ध हुँदा उखु किसानको बिचल्ली | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
चिनी उद्योग अवरुद्ध हुँदा उखु किसानको बिचल्ली
प्रकाशित मिति १ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:३० लेखक नेपाली जनता
नवलपरासी । लगाएको उखु बाली खेतमै सुक्दै गएपछि पश्चिम नवलपरासीका किसान बिचल्लीमा परेका छन् । समयभन्दा करीब दुई महीना ढिलो सञ्चालनमा आएका चिनी उद्योगहरुले किसानको सहजै रुपमा सबै उखु खरीद नगरेपछि किसान बिचल्लीमा परेका हुन् ।
सबै चिनी उद्योग समयभरि सञ्चालनमा आएका किसानले उत्पादन गरेका सबै उखु पेलिने वाग्मती चिनी उद्योगका महाप्रबन्धक टङ्कनाथ काफ्ले बताउँछन् । सञ्चालनमा आएका चिनी उद्योगले पनि उखु किसानसँग पर्याप्त मात्रामा उखु खरीद नगरेपछि किसान चिन्तित बनेको उखु किसानका अगुवा प्रतापपुर–६ गुठीप्रसौनीका धीरज त्रिपाठीको भनाइ छ ।
त्रिपाठीका अनुसार यसपटक चिनी उद्योगहरुले आवश्यकता अनुसार मात्र उखु खरीद गर्ने गरेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको सबै उखु यस वर्ष खपत नहुने निश्चित देखिन्छ । इन्दीरासुगर मिलबाट अघिल्लो वर्षको करीब चार करोड उखु खरीद गरेवापतको बाँकी रकम हालसम्म पनि किसानले पाएका छैनन् । अझ चिनी उद्योगले उखु किसानले उत्पादन गरेको सबै उखु खरीद नगर्ने अवस्था देखिएपछि किसान मर्कामा परेका हुन् ।
किसानको सबै उखु पेलानी हुन नसक्ने अवस्था आएपछि किसान निकै समस्यामा परेका छन् । अघिल्लो वर्षको रकम नपाउने र यस वर्ष सबै उखु उद्योगले खरीद नगर्ने भएपछि किसान दोहोरो मारमा परेको उखु किसानका अगुवा प्रतापपुर–६ गुठीप्रसौनीका दिनेश त्रिपाठी गुनासो गर्छन् ।
केही मात्रमा भारतीय उखुसमेत नेपाल भित्रिएकाले किसान झन समस्यामा परेको उखु कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव बताउँछन् । राज्यले उखु बालीलाई राष्ट्रिय बालीको रूपमा घोषणा गरे पनि उखु किसानको समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५३६.५६ पैसा निर्धारण गरिसकेको छ ।
यसरी हुन्छ सेतोचिनी चोरी-निकासी
करोडौंका बहुमूल्य जडीबुटी मिलेमतोमा विदेशतिर
वन कार्यालयले समात्यो ७ हजार १ सय किलो
प्युठानमा शकांस्पद बस्तु फेला
प्युठान । जिल्लाको स्वर्गद्धारी नगरपालीको कार्यालय नजिकै शकांस्पद बस्तु फेला परेको छ । स्वर्गद्धारी नगरपालीका वडा नम्बर ४…
मन्त्रीहरुमा सुन मोह, यत्रो सुनको स्रोत के ?
काठमाडौं। आज कस्ले चिया र नास्ता खुवाउला भन्दै सिंदरवारका क्यान्टीनमा देखिने केपी ओलीको नेतृत्वका मन्त्रीहरु सबै सुनकै पारखी ।…
काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा पत्रकारहरुले देशैभर धर्नासहित प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा पत्रकारहरुले शुक्रबार काठमाडाैंमा…
कलिलैमा बिहे, उर्लंदो जवानीमा बिछोड
काठमाडौ‌ । कक्षा ६ मा पढ्दा १४ वर्षमै प्रेमविवाह गरेकी तल्कोट गाउँपालिका ५, बझाङकी पुनमकुमारी सिंहले २० वर्षमै श्रीमान्सँग…
पाथिभरा दर्शन गरी फर्कने क्रममा दर्शनार्थीको मृत्यु
ताप्लेजुङ । प्रशिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिरको दर्शन गरी फर्कने क्रममा एकजना तीर्थयात्रीको बाटैमा मृत्यु भएको छ। पनौती नगरपालिका काभ्रेका…
सलमानको सिको गर्दै पल शाह
सेक्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ? 272 views
नेपाली सेनाका जर्नेल, कर्नेलका घरघरबाट ‘अर्दली’हरु फिर्ता गर्न निर्देशन 159 views
दिनमा एक पटक यौन सम्पर्क नगरी बस्न नसक्ने १८ वर्षीया युवतीको व्यथा 78 views
घर लुट्ने ‘खुंखार डाँका’ प्रहरी इन्काउन्टरमा समातिए 21 views
यी रोगहुनेहरुले नपिउनुहोस् कागती पानी 16 views